Fanambarana savaranonando: natsinkafon’ny KMF/Cnoe ny lesoka tamin’ny fifidianana | NewsMada
Fanambarana savaranonando: natsinkafon’ny KMF/Cnoe ny lesoka tamin’ny fifidianana
Nanao fanambarana vonjimaika ny amin’ny fanaraha-maso nataony tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny eo anivon’ny KFM/Cnoe sy ny Liberty 32 ary ny Justice et Paix, ny asabotsy teo tetsy Antaninarenina. Marobe ny lesoka hitan’izy ireo tamin’izany, na nialoha na nandritra ny fifidianana.
Anisan’ny misongadina ny tsy fanajana lalàna. Eo, ohatra, ny efa endrika fanentanana ny olona hifidy sy hanohana ny kandidà isan-tokony avy, tamin’ny famoriam-bahoaka nialoha ny fe-potoana nanaovana ny fampielezan-kevitra. “Efa nisy tamin’ireo kandidà ny nampiasa avy hatrany ny laharany nanentana ny olona hifidy azy raha vantany vao vita ny antsapaky ny laharan’ny kandidà tsirairay avy”, hoy izy ireo. Itovian’izy ireo amin’ny mpanara-maso vahiny koa ny lesoka amin’ny tsy fisian’ny famaritana ny fetran’ny fampiasam-bola natokana ho amin’ny fampielezan-kevitra. “Hita taratra tamin’ireo fitaovana nampiasain’ny kandidà sasany fa tena nandany vola tsy toko tsy forohina izy ireo ary tsy nisy fampahafantarana ny mpifidy ny fiavian’izany”, hoy ihany izy ireo. Manampy ireo ny tsy fanajana ny tsy fiandanian’ireo mpiasam-panjakana amin’ny kandidà mba hiantohana fa manana safidy malalaka tsy an-tery ny mpifidy eny amin’ny fiarahamonina.
Fihantsiana anaty tambajotra sosialy
Manampy trotraka izany ny fihantsiana novoizin’ireo mpiara-dia amina kandidà tao amin’ny tambajotra sosialy. Nisy mihitsy famoronana kaonty sandoka ahafahana mivoy resaka tsy voamarina. Eo koa ireo mpikamban’ny biraom-pifidianana, nampiseho fiandaniana satria nanoro ny mpifidy ny amin’ny fomba hanaovana ny marika eo amin’ny biletà tokana ary manondro izany ho amin’ny laharana kandidà iray mitovy hatrany. Nisedra olana noho ny asan-dahalo koa ireo birao fandatsaham-bato sasany fa nanohintohina ny fizotry ny fifidianana izany.
Na eo aza anefa ireo rehetra ireo, niaiky ny telo tonta fa nizotra am-pilaminana ny fifidianana ary tsy nahitana korontana firy izany. Feno fahendrena ny vahoaka ka nanaiky ny fandaminana na nisy aza ny lesoka teo amin’ny fikarakarana.
Ambany ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy
Tsikaritr’ireto avy amin’ny fiarahamonim-pirenena ireto koa fa nihena ny taham-pahavitrihan’ireo mpifidy tamin’ity indray mandeha ity raha mitaha tamin’ireo fifidianana teo aloha.
Nitondra vahaolana ihany anefa ny KMF/Cnoe sy ny Liberty 32 ary ny Justice et Paix, manoloana ireo rehetra ireo. Anisan’izany ny fampiharana tanteraka ny andininy rehetra tsy misy anavahana ny voalazan’ny lalàna. Ny fanamafisana ny fanabeazana ho olom-pirenena amin’ny fomba fampiasana tambajotra sosialy mba tsy hanao teny tsy voahevitra na manao fihantsiana hikorontana ka ifarimbonan’ny antoko politika sy ireo sehatra mpanabe rehetra izany toy ny fikambanana miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana izany.
Tokony ho tony sy tsy hatao fitaovana politika
Hamafisina ny fanabeazana ho olom-pirenena momba ny fifidianana. Fanamafisana sy fanatsarana ny fiofanana ho an’ireo rantsa-mangaika ny Ceni ka hatrany amin’ireo mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana.
Nanentana ny olom-pirenena rehetra ho tony ary tsy hanaiky hatao fitaovana politika mandritra ny zotram-pifidianana ka hatramin’ny fanambarana ny vokatra ofisialy ny telo tonta. “Mba ho fifidianana milamina, lavitry ny hetraketraka ahafahana miroso amin’ny fampandrosoana ny firenena sy mibanjina ny ho avy izany”, hoy izy ireo.